ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ လိုအပ်ချက်
ကိုယ်ကျင့်တရားအကြောင်းကို ရေးဖို့ မမခင်မင်းဇော်က tag ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းလေး တွေ မေးမိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြားဖူးနားဝလေးတွေရော၊ ဖတ်မှတ်လေ့လာ ထားဖူးခဲ့သမျှ လေးတွေပါ ပြန် တွေးပြီး စဉ်းစား ချင့်ချိန် ကြည့်ပါတယ်။ ဖတ်မှတ်လေ့လာဖူးသမျှလေးတွေက text color အစိမ်းရင့်လေး ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ဉာဏ်မီသမျှ စဉ်းစားမိတာလေးတွေကို ချရေးထားတာက အပြာရောင် ဖြစ်ပါ တယ်။
၆. ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုးရင်ရော လောကီ၊ လောကုတ္တရာ၊ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း နဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ ရော ဘာကောင်းကျိုးရလဲ ဆိုတာလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမေးအဖြေ လုပ်မိပါတယ်။ စာဖတ်သူများလည်း ထပ်ဖြည့်စရာ မေးခွန်းလေးတွေ ရှိသေးရင် လေးစားစွာ လက်ခံနိုင်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့် တွေနဲ့ ဆွေးနွေး နိုင်အောင် မှတ်ချက်မှာ ရေးခဲ့ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
၁. ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ ဘာလဲ။ ကိုယ်ကျင့်တရားကို စောင့်ထိန်းဖို့ ဘာလို့လိုအပ်တာလဲ။
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ လူတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆင့်တစ်ခု သတ်မှတ်ဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ခံနိုင်ဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိဖို့အတွက် စောင့်စည်းရတဲ့ ကျင့်သုံးရတဲ့ စည်းတစ်ခု လို့ ကျွန်မကတော့ မြင်ပါတယ်။ ကိုယ့် သဘာဝ အတိုင်း ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ် လွှတ်ထားရတဲ့ တရားမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်က တမင် ကျင့်ယူရတဲ့ တရား ဖြစ်တာမို့ ကိုယ်ကျင့်တရားလို့ ခေါ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရား စောင့်ထိန်းဖို့ လိုတယ်လို့ ကျွန်မ ကတော့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တိရစ္ဆာန်နဲ့ လူ ကွဲပြား ခြားနား သွားစေတာ ကိုယ်ကျင့်တရား ကြောင့်လို့ ကျွန်မက လက်ခံထား လို့ပါ။ လူဟာ တိရစ္ဆာန် တော်တော်များများ ထက် ရုပ်ခန္ဓာ အစွမ်းအစ ပိုင်းမှာ အားနည်း နေပါလျက် စိတ်ဓာတ် အသိဉာဏ် တွေးခေါ် မြော်မြင်မှု ပိုင်းမှာ ထူးခြား သာလွန် နေခဲ့ကြလို့ ကိုယ်နေထိုင်နေတဲ့ လောကကို ပိုမိုတိုးတက် သာယာ ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြလို့ သတ္တလောကကို ဦးဆောင် စီမံခန့်ခွဲ နိုင်လာခဲ့ ကြတာပါ။ တိရစ္ဆာန်တွေဟာ သဘာဝကပေးတဲ့ အသိဉာဏ်ရဲ့ ထိန်းကွပ်မှုနဲ့ သူတို့ မျိုးနွယ်ကို စောင့်ရှောက်ကြတာ၊ ခေါင်းဆောင်မှု ပေးတာ၊ ခေါင်းဆောင်က လက်အောက် ငယ်သားကို အနစ်နာခံ ကာကွယ် တတ်တဲ့ စိတ်ရှိတာတွေကို Discovery channel က ထုတ်လွှင့် ပြသ လေ့ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်း အစစ်လေး တွေကို ကြည့်ရင်း တွေ့နိုင် ပါ တယ်။ တိရစ္ဆာန်တချို့ရဲ့ အကျင့် လေးတွေက လေးစားစရာ ကောင်းပေမယ့် သူတို့ အကျင့် လေးတွေက သဘာဝ တရားက ပေးတဲ့ သူတို့ရဲ့ အလေ့ကျ အကျင့် ဖြစ်ပြီး တမင်မွေးယူ ကျင့်ယူ ရတဲ့ အကျင့်ကို တိရစ္ဆာန် တွေ မတတ်နိုင် မကျင့်နိုင် ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိုယ်ကျင့် တရား ရှိသင့် ကျင့် သင့် တယ်လို့ ကျွန်မက ယူဆပါတယ်။
လောက ပါလ တရား လို့ ခေါ်တဲ့ လောကကို စောင့်ရှောက် တဲ့ တရား ၂ပါးသာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ တရားလေး ၂ပါးကတော့ မကောင်းမှု ပြုလုပ်ရမှာကို ရှက်ခြင်းနဲ့ ကြောက် ခြင်း ပါပဲတဲ့။
မကောင်းမှု ပြုရမှာ ရှက်ကြောက် နေတယ် ဆိုကတည်းက မကောင်းတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား မဟုတ်ဘဲ ကောင်းတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ဖြစ်အောင် နေခြင်းကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကိုယ်ကျင့်တရား အမျိုးအစား ကိုပဲ လောက စောင့်တရား လို့ကို သတ်မှတ် ထားရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ လောကထဲမှာ နေတဲ့သူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့် တရားတွေ ကိုယ်တိုင် က ဒီလောကထဲက လူတွေရဲ့ စိတ်တွေကို အကောင်းအဆိုး တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချခိုင်း နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို ဆုံးဖြတ်ချက် အကောင်းအဆိုး တွေကနေပြီး လုပ်ရပ် အကောင်းအဆိုး တွေ ပေါ်ပေါက်လာမယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ် အကောင်း အဆိုး တွေက နေမှ သာယာတဲ့ လောက သို့မဟုတ် အကျည်းတန်တဲ့ လောကတွေကို ပုံဖော်စေမှာ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုပဲ ကိုယ်ကျင့် တရားဟာ လောကကို သွယ်ဝိုက် ပတ်သက်နေတာ မဟုတ်ဘဲ တိုက်ရိုက်ကို ပတ်သက်နေတာ တွေ့နိုင် ပါတယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းကို တခြားလူတွေကတော့ အမျိုးမျိုး သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ငါးပါးသီလ လုံတာ၊ သမ္မာကျမ်းစာကို လိုက်နာတာ၊ Gentleman အမူအကျင့် ရှိတာ၊ စသဖြင့် ခေတ်အခြေအနေ အလိုက်၊ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအလိုက် ကျင့်သုံးကြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ဓလေ့ထုံးစံအလိုက်၊ စတဲ့စတဲ့ မူတွေ၊ စံတွေပေါ်ကို မူတည်လို့ ကိုယ်ကျင့်တရား အကောင်းအဆိုးကို ခွဲခြား သတ်မှတ် ကြပါတယ်။ အဲဒီစံနှုံန်းတွေ တဖြည်း ဖြည်း ယုတ်လျော့ လာတာလား စံနှုံး သတ်မှတ်ချက် ရွေ့လျော လာတာလား ဆိုတာ စာဖတ်သူများ ဘယ်လို သတ်မှတ် ချင်ကြမလဲ တော့ မသိပါ။
ကိုယ့်စိတ်အလိုလိုက်ချင်တိုင်း အဲလို စိတ်အလို လိုက်ချင်သူ တွေ များလာတိုင်း အဲဒီလူတွေ စုပြီး ကိုယ်ကျင့်တရား အတွက် စံသတ်မှတ်မှုကို စိတ်ကြိုက် နေရာရွေ့ပစ် လိုက်ကြတာ မျိုးကို ကျွန်မကတော့ ရောယောင်ပြီး လက်မခံနိုင်ပါ။ ဥပမာ ကြာကူလီ ပိုင်းလုံးက လူတွေ ငါ့အလိမ်ခံရတာ သူတို့ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ခံအား နည်းလို့မို့ တမင် လိုက်ပြီး ပညာပေး သင်ကြား ပေးနေ တာပါလို့ အသံကောင်းဟစ် ပြန်လည် ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကတော့ အတွေ့အကြုံနည်းတဲ့ ရိုးအတဲ့ ရိုးသားတဲ့ သူတပါးကို လိုက်လံ မြှူဆွယ် ဖြားယောင်း ဖျက်ဆီးပြီး ကိုယ်ကျိုး အတွက် အသုံးချ နေတာ မျိုးကို ရွံရှာ အော့နှလုံး နာပါတယ်။ အဲလို ကိုယ်ကျင့်တရားကို လောက်ထိုး ခြကိုက် ကိုယ်ကျင့်တရား လို့ပဲ ကျွန်မကတော့ သတ်မှတ် ပါတယ်။
ကိုယ့်ကို သူတပါး သည်လိုလာပြုမူရင် ကိုယ်က ဒီလို အပြုခံရတာ ကြိုက်နိုင်လောက်တဲ့ အလုပ် အကျင့် တရား နဲ့ တခြား သူတပါးကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် အားဖြင့်ရော စိတ်ခံစားမှု အားဖြင့်ပါ ဘယ်နည်းနဲ့မှ တမင်သက်သက် မထိခိုက် စေနိုင်တဲ့ အကျင့်တရားကို ကောင်းသော ကိုယ်ကျင့်တရားလို့ ကျွန်မက သတ်မှတ်ပါမယ်။ အဲဒါနဲ့ တိုက်ရိုက်ရော သွယ်ဝိုက်ပြီးပါ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဆိုးသော ကိုယ်ကျင့်တရားလို့ ကျွန်မက သတ်မှတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းဖို့ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ လောကနီတိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ စရိုက် လွှမ်းမိုးမှု၊ ၀ါသနာ ဗီဇ၊ ဘ၀အထုံ စသဖြင့် များစွာ လိုအပ်မယ်လို့ ဖတ်ဖူးတာတွေကို စုစည်းပြီး ကောက်ချက်ချ နိုင် ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မကတော့ အမှားတရားနဲ့ စိတ်ဆန္ဒ အတ္တတွေရဲ့ သွေးဆောင် ဖြားယောင်းမှုကို ရှောင်ရှား ဖယ်ရှားနိုင် လောက်အောင် စိတ်ဓာတ် ကြံ့ခိုင်မှု၊ အမှန်တရားကို လက်ခံနိုင်စွမ်း ရှိလောက် အောင် ရဲဝံ့မှုနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားမှုတို့သာ အဓိက ကျတယ်လို့ လိုအပ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုးဖို့ အတွက် ကတော့ အထွေအထူး ဘာမှ မလိုအပ်ပါဘူး။ စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက် အကျင့်ဆိုး အကျင့်မိုက် တွေကို အသိတရားနဲ့ မထိန်းချုပ်ဘဲ လွှတ်ပေး လိုက်ရုံပဲ လိုပါတယ်။
ရှင်းရှင်းလေးပါ။ လူပီသဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဆိုတာ ပုထုဇဉ်မို့ အမှားမကင်းဘူး ဆိုတာကို ကျွန်မ လက်ခံ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ခြွင်းချက် တစ်ခုပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ခြွင်းချက်ကို ဆင်ခြေလို ရေလဲနဲ့ သုံးပြီး ငါက ပုထုဇဉ်မို့ မှားခွင့် ရှိတယ် ဆိုပြီး လုပ်ချင်တဲ့ ဟာတွေကို မှားမှန်း သိသိနဲ့ စိတ်အလိုကို လိုက်ပြီး ဆက်မိုက်မှား နေတာမျိုး ကိုတော့ လုံးဝ ခွင့်မပြု သင့်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့အတွက် ပထမဆုံး ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစား ယုံကြည်ခြင်း ပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ချ လိပ်ပြာ လုံခြင်းလောက် စိတ်ချမ်းသာ စရာ ကောင်းတာ ကျွန်မ အတွက် တခြားအရာ မရှိလို့ပါ။ လိပ်ပြာလုံခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိခြင်း လေးစားခြင်းတို့ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ် ပြီး အဲဒီယုံကြည်မှုက ဘ၀မှာ အောင်မြင်သူတစ်ဦး ဖြစ်ဖို့ အဓိက သော့ချက် ဖြစ်လာ ပါတော့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံမရဲ ဖြစ်နေသူမှာ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး ကိုယ်တိုင် က ညံ့နေပါပြီ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစား ယုံကြည် နေသူ တစ်ဦးကို ဘယ်နေရာ မှာမှ မယှဉ်နိုင် တော့ပါဘူး။ သည်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစား ယုံကြည် နေသူ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ကိုယ် ရည် ကိုယ်သွေး တွေဟာ ထက်မြက်နေပြီး သူ့ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ လူမှု အသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတွေက သူ့ကို ယုံကြည် အားကိုး လာပါ တော့တယ်။ ယုံကြည်အားကိုးထိုက်မှန်း သိလာတဲ့အခါ ရိုသေလေးစား လာပါ တော့တယ်။ လူတွေရဲ့ ရိုသေ လေးစားမှု ကို လိုချင်ရင် မက်လုံးပေးမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု တို့နဲ့ လဲလှယ် လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ မက်လုံးပေးရင် မက်မောမှုပဲ ရမယ်။ ခြိမ်းခြောက်ရင် ကြောက်ရွံ့မှုပဲ ရနိုင်ပါမယ်။ ဒါတောင် ရာခိုင် နှုံးပြည့် မသေချာပါဘူး။ မက်လုံးပေးတိုင်း မမက်တဲ့ လူတွေ ရှိနေသလို ခြိမ်းခြောက်တိုင်း မကြောက် သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ သည်လို လူရိုသေလေးစားခံရလာတဲ့အချိန်မှာ မနာလိုသူတွေ ချောက်တွန်း ခံရနိုင် တာကတော့ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းခြင်းရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးလို့ မှားယွင်း သတ်မှတ် ခံရ နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ နာမည်ကျော်ကြားခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပါ။ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ ကိုယ်ကျင့် တရား ကောင်းသူဟာ ချောက်တွန်း ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကနေ ပြန်လည် ကျော်လွှား နိုင်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားဟာ ဘယ်တော့မှ မတိမ်ကောပါဘူး။ သည်နေရာမှာ အရေးကြီးတာ တစ်ခု ဖြတ်ပြောမှ ရပါမယ်။ ဘာလဲ ဆိုတော့ မကောင်းတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုးတွေရှိနေလျက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆိုးလို့ ဆိုးမှန်း မသိတဲ့ လူတော်လူဆိုးတွေရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည် မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ လူရည် လူသွေးပါပဲ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေမှာလည်း အားကိုးလောက်စရာ လူရည် လူသွေး တွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးလည်း လောကမှာ ရှိနေပါ သေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆိုးလို့ ဆိုးမှန်း မသိသူ ၂မျိုးကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ တမျိုး ကတော့ မွေးကတည်းက ကျင်လည် လာရာ ပတ်ဝန်းကျင် ကြောင့် ဒါမျိုးပဲ တွေ့ဖူး ကြုံဖူး ခဲ့လို့ ကောင်းရ ကောင်းမှန်းကို မသိလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆိုးမှန်း မသိသူပါ။ နောက် တမျိုး ကတော့ ဆိုးမှန်း သိပေမယ့် စိတ်အလို ဆန္ဒဆိုး တွေကို မလွန်ဆန် နိုင်လို့ ဆိုးရင်းနဲ့ ကောင်းခြင်း ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို လိုချင် လွန်းလို့ ကောင်းချင် ယောင်ဆောင် ရင်း သူတပါးကို လူကောင်းအဖြစ် ဟန်ဆောင် လိမ်လည် ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးရင်းနဲ့ အရှိန်လွန်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန် လိမ်ညာ မိရာက ကိုယ့် ကိုယ် ကို မျက်ခြေပြတ် လောက်အောင် ကိုယ့်အလိမ်မှာ ကိုယ်ပြန်မိ သွားသူ တွေပါ။ ဒုတိယ တစ်မျိုးက ဘုန်းကြီး တစ္ဆေမို့ ချွတ်ရ ပိုခက် ပါတယ်။ ပိုပြီးလည်း ကြောက်စရာကောင်းပြီး အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာ တစ်ခုက အခြေခံ မကောင်းသူတွေမို့ တကယ့် ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းသူ အစစ် နဲ့ ရင်ဆိုင် တိုးမိတဲ့ အခါမှာ မျက်နှာဖုံးတွေ ပျောက်ကုန်ပြီး ဇာတိမှန် ပေါ်ကုန်လေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါက တော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ရင်းထဲက ပုန်းကွယ်နေတဲ့ မနာလို စိတ်ပါပဲ။ ဒီစိတ်ကို ဆွပေးခံရလေ၊ ဇာတိမှန် သရုပ် မှန် ပေါ်လေမို့ မကြာခင် ကျဆုံး ရလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခါ ပတ်ဝန်းကျင်က လူမှု အသိုင်းအ၀ိုင်း လည်း ပညာရ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား အမှန်အကန် ကောင်းသူ ဟာလည်း အောင်မြင်မှု တစ်ခုကို ထပ်ရလေ့ ရှိပါ တယ်။ အဲဒီ အကြောင်းအရာတွေကတော့ စာတင်မခံရရင်တောင် သမိုင်းဝင်နေမှာပါ။ သမိုင်းဝင်တာမှ သံသရာနဲ့ ချီပြီးကို သမိုင်းဝင်လေ့ ရှိတာကို ငါးရာငါးဆယ် ဇာတ်နိပါတ် တော်များမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တရားနဲ့ ယှဉ်ပြော ရရင်တော့ လောကီမှာ အချိန်တို အတွင်းမှာ မြင်သာတဲ့ ကောင်းကျိုး တွေကို အထက် မှာ ဖြော်ပခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မမြင်သာတဲ့ အကျိုးတွေကတော့ ကုသိုလ်စိတ် တွေကနေ ဖော်ဆောင် ပေးတဲ့ ကုသိုလ် အကျိုးပေး တွေပါပဲ။ လူချစ်လူခင်၊ ကူညီလိုသူ ပေါများခြင်းနဲ့ ကုသိုလ်စ်ိတ် အလိုက် လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန် မှာရော အနာဂတ် သံသရာမှာပါ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် စေတနာ အဟုန်ကြောင့် ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းနေတဲ့ လက်ရှိ အချိန်ကနေ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်း အောင် နေစဉ်က ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဇော အဟုန်ကနေ အကျိုး ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်အထိ ကုသိုလ်တွေပဲ ပြန်အကျိုး ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ လောကုတ္တရာမှာ ခံစားရမယ့် ကောင်းကျိုး တွေပါ။
၆. ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုးရင်ရော လောကီ၊ လောကုတ္တရာ၊ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း နဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ ရော ဘာကောင်းကျိုးရလဲ။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုးတာကို ၂မျိုးပြန်ခွဲမှ အဆင် ပိုပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ ပေါ်တင် ဗြောင်ဆိုး တာနဲ့ သူတော်ကောင်း ယောင်ဆောင်ပြီး ဆိုးတာ တွေပါ။ ပေါ်တင် ဗြောင်ဆိုး တာကတော့ တုန့်ပြန်မှုက သိသာပါတယ်။ အထူးပြောစရာ မလိုလောက် အောင်ပါပဲ။ သူတော်ကောင်း ယောင်ဆောင်ပြီး ဆိုးတာက ပညာပါတော့ တုန့်ပြန်မှုက သူ့ပညာသားအပေါ် အားထုတ်မှုကို မူတည်ပြီး တုန့်ပြန်ပုံ အနှေးအမြန်၊ အဖြောင့်၊ အကွေ့ အကျိုးပေးပုံ ကွာပါတယ်။ သူတော်ကောင်း ယောင်ဆောင်ရင်း သူတပါးကို သူတော်ကောင်း တရားတွေ ပို့ချရင်း သဘောထား ကြီး နည်း သင်ကြားပေးပြီး တဖက်သားရဲ့ သဘောထား ကြီးမှု၊ ခွင့်လွှတ်မှု တွေကို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး ကိုယ်ကျိုး အတွက် အသုံးချ တတ်တာမျိုး တွေလဲ လောကမှာ အများသားပါ။ အထူးသဖြင့် မြင်သာတဲ့ ဥပမာ ပေးချင် တာက မြာပွေတဲ့ ပိုင်းလုံး တွေပေါ့။ တကယ်ချစ်ရင် ခွင့်လွှတ်ချစ်နဲ့ ချစ်သင့်တာပေါ့ လို့ တွင်တွင်ပြော၊ သဘော ထားတွေ ကြီးချင်ယောင် ဆောင်ပြီး သွေးသားဆန္ဒကို ဦးစားပေး အခွင့်ကောင်း ယူနေတဲ့ သူတွေ အများ ဆုံး လုပ်လေ့ လုပ်ထ ရှိပါတယ်။ အကြောင်း မသိသူများ ကတော့ အဟုတ် မှတ်ပြီး ခံစားလို့ပေါ့။ သူတို့ ကတော့ တစ်ခြုံ မကွယ်ခင်က နောက်တမယ်ကို ကြိုပြီး ဖုန်းနဲ့ ချိတ်နေတဲ့ လူစားမျိုးတွေပါ။ မယားကြီးနဲ့ မယား ငယ် ကို သူငယ်ချင်းလို့ ပြောပြီး ပြောင်လိမ်ပြီး မိတ်ဆက် ပေးနေတာတွေ၊ လင်ကြီးနဲ့ လင်ငယ် တွေကို မောင်နှမ ၀မ်းကွဲပါလို့ လိမ်ပြီး မိတ်ဆက် ပေးရဲတာ တွေအထိ ကိုယ်ကျင့်တရား ပိုးထိုး လောက် ကိုက် နေသူတွေ ကတော့ ဒီနည်းကို သုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ အဝေးကြီးမှာလို့ မထင် လိုက်ပါနဲ့။ မြန်မာပြည် မှာပါ။ နောက်ဥပမာအစစ် တစ်မျိုးကတော့ အလုပ်သမား ပွဲစား ကုမ္ပဏီတချို့ပါပဲ။ အလုပ်သမား ဘက်ကနေ အကျိုးဆောင်ခ မယူပါဘူး။ အလုပ်ရှင် ဘက်ကပဲ အကျိုး ဆောင်ခ ယူပါတယ် မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ ပိုရစေ ချင်လို့ပါ ဆိုတော့ မသိခင်က သာဓုခေါ်မိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံခြားရောက်မှ လှည့်ကွက်ကို လက်တွေ့ မြင်ပါတယ်။ တကယ့် အလုပ် သမား ပေါက်ဈေးက တစ်လ တစ်ထောင် တန်နေ တာကို အလုပ်သမား ဈေးကွက် အကြောင်းကို မသိရ တဲ့ ပြည်တွင်းက မျက်စိပိတ် နားပိတ် အလုပ်သမားများကို တစ်လ ၆၀၀နဲ့ ဖြတ်ပြီး စာချုပ်ချုပ်၊ အလုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီနဲ့ ညှိပြီး အလုပ်ရှင် ဆီက ရိုးရိုးပွဲခ အပြင် အလုပ် သမား ဆီကပါ တလ လေးရာ ဖြတ်ယူခိုင်း ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ အကြောင်း သိပြီး အလုပ် ပြောင်းတာ မဖြစ် ရအောင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်ရှင်ကို အလုပ်သမားရဲ့ ပတ်စ်ပို့ကို သိမ်းခိုင်း ထားပြီး အပြင်ထွက်ခွင့် မပြုတာပါ။ ကိုယ့်လူမျိုး အချင်းချင်းကတောင် ဒါမျိုး လုပ်ရက် သေးတော့ ရှေ့ကနေ နမူနာ လုပ်ပြထား တော့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်ရှင် ကလည်း အိုဗာတိုင်ကို အလကား ခိုင်းတော့ တာပေါ့။ ဒီလို ကိုယ်ကျင့် တရား ဆိုးတွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး နောင်မဖြစ်အောင် တားဆီး ရမှာပါ။ ဒါမျိုးကို သဘောထား ကြီးပြီး ခွင့် လွှတ် ထားလို့ ကတော့ ခေါင်းပေါ်တက် - ယိုဆိုတဲ့ စကားပုံ ရိုင်းရိုင်းက လက်တွေ့ ဖြစ်သွားပါ လိမ့် မယ်။ ဖြစ်သင့် တာထက် သဘောထား ကြီးပြနေ တာမျိုးတွေ၊ သဘာဝ ကျသင့်တာ ထက် ပိုကောင်းပြ နေသူမျိုး တွေဟာ ဒီလို လူစား တွေပါပဲ။ ပျားသကာ ဆမ်းထားတဲ့ စကားလုံး ချိုချိုတွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အဆိပ် ပြင်းပြင်းတွေ ရှိတတ် တာမို့ သတိထား နိုင်မှ တော်ရုံ ကျပါမယ်။ ဒီလို ကိုယ်ကျင့် တရား ဆိုးဝါး ယုတ်မာ လွန်း သူတွေ အတွက် ရလာဒ် ကတော့ သူတို့ ဘ၀မှာ အစစ်အမှန် ဆိုတာကို ဘယ်တော့မှ ကြုံတွေ့ခွင့် မရနိုင်တော့ တာပါပဲ။ အဲဒါ ကြောင့်လဲ ဘ၀မှာ စိတ် ကျေနပ်မှု အစစ် ဆိုတာကို မရနိုင် တော့ဘဲ ကိုယ့် ၀င်္ကဘာ ထဲမှာ ကိုယ်ပြန် လမ်းပျောက် နေတတ် ပါတယ်။ လက်ရှိ လူ့ဘ၀ ပတ်ဝန်းကျင်က လူမှု အသိုင်း အ၀ိုင်း ထဲမှာတောင် လူကောင်း ရှောင်တဲ့၊ လူလိမ် ပတ်လည် ၀ိုင်းနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ နိဂုံးကို မှန်းဆ ကြည့်နိုင် ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်း ကတော့ မျိုးရိုးကိုက ဆိုတဲ့ စကားလုံး အောက်မှာ သားစဉ် မြေးဆက် လူ့အဆင့်အတန်း ပျောက်ရင်း မျက်နှာ မရှိဘဲ နေရတတ် တာပါပဲ။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေ ပြန်ဝဋ်လည် တဲ့ အခါ သားသမီး အစစ်၊ မြေးအစစ် မရနိုင် တော့တာပါပဲ။ လောကုတ္တရာ အကျိုး ပေး ကတော့ အထူး ပြောစရာ မလိုတဲ့ ငရဲပါပဲ။ ဘယ်ဘာသာ တရားကမှ သည်လိုလူမျိုးကို ကောင်းကင် ဘုံကို မပို့ပါဘူး။ ဒီလိုလူစားကတော့ လူမှုရေး မှာပဲ ဒီနည်း ပရိယာယ်ကို သုံးသုံး၊ စီးပွားရေးမှာပဲ ဒီနည်း ပရိယာယ်ကို သုံးသုံး၊ သုံးပုံ နည်းပရိယာယ် ဆင်တူ သလို အကျိုးပေး ပုံချင်းလဲ ဆင်တူပါပဲ။
နိဂုံးချုပ် ရရင်တော့ ကျေးဇူး တော်ရှင် ရွှေဥမင် ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ် လူအစစ် ဆိုတဲ့ ဆုံးမ စကားလေးနဲ့ နိဂုံးချုပ် ချင်ပါတယ်။ လူဖြစ် လာလို့ လူကျင့်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ကျင့်သုံး ရပါတယ်။ လူအစစ် ဖြစ်ချင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တကယ် ချစ်ရာ ရောက်ချင် ရင် အကုသိုလ် တရားတွေ ပွားများစေတဲ့ လက်ရှိ အချိန် ပစ္စုပ္ပန် ရော၊ အနာဂတ် အချိန် သံသရာ မှာပါ အကျိုး နည်းစေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား အဆိုးတွေကို လတ်တလော စိတ် အလိုဆန္ဒ ပြေပျောက်ဖို့ အတွက် အလွယ် မကျင့်သုံး ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ လူစစ်ရာ ရောက်အောင် ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းကို ကျင့်သုံးဖို့ လိုပါတယ်။ ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ သတိပေး စကားလေးက သိပ်ထိရောက် ပါတယ်။ “ပျားရည် မစစ်ရင် ခွေးစား ခံရမယ်၊ လူမစစ်ရင်လဲ ငရဲခွေး စားခံရမယ်” တဲ့။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းရင် လူစစ်ပြီး ငရဲခွေး အစား ခံရတဲ့ ဘ၀က လွတ်ပါမယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းအောင် ကျင့်ကြံ နေထိုင်ရင် သံသရာက မထွက်မြောက် နိုင်သေး ရင်တောင် သံသရာမှာ အထက်တန်း ကျကျ ကျင်လည် ရနိုင်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုးရင်တော့ ငရဲခွေး စားခံရတဲ့ ငရဲသားပဲ ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်ရှင်။
ကဲ.. ကျွန်မတို့မှာ ရွေးချယ်စရာ နှစ်လမ်းပဲ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းအောင် နေကြမလား။ ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုးအောင် နေကြမလား။ ကံအကျိုးပေး ကိုတော့ မျက်လှည့်ပြလို့ မရနိုင်ပါဘူးရှင်။
ညီမရေ စနစ်တကျ ပိုင်းခြားစိတ်နဲ့
အသေအချာ ရေးထားတဲ့ပို့စ် ဖြစ်နေလို့
အားရကျေနပ်မိတြ့အပြင် ခံယူချက်တွေ စဉ်းစားဥာဏ်တွေ ကိုလည်း လေးစားစွာထောက်ခံတယ်လို့ ပြောပြပါရစေ။
အမ တက်ဂ်ထားတာကို ခုလို အလေးအနက် ရေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်။
ဒီနေ့လို ခေတ်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ခိုင်မာနေဖို့ လိုအပ်တယ် မဟုတ်လား ညီမရေ။